Iindaba -Umthengi ovela e-Australia, eSingapore, eThailand weza kumzi-mveliso wethu wophando lweentsuku ezimbini kunye notyelelo.
Umthengi ovela e-Australia, eSingapore, eThailand weza kumzi-mveliso wethu esenza uphando lweentsuku ezimbini kunye nokutyelela.
Umthengi ovela e-Australia, eSingapore, eThailand weza kumzi-mveliso wethu esenza uphando lweentsuku ezimbini kunye notyelelo.
Bajolise kwintambo yentsimbi engenacici ye-1x61mm, ∮42mm, Ngexesha lophando, abathengi batyelele indawo yemveliso kwaye babukela inkqubo yokuvelisa isampulu yentambo yentsimbi engenazingcingo ye-1 × 61 mm, 42mm, emva koko inkomfa yetekhnoloji yocingo malunga Intambo yentsimbi engenacingo yayibanjiwe
Iindwendwe zonelisekile bubuchwephesha kunye nezixhobo zomzi mveliso wethu, zivakalisa ukuqonda kunye nentsebenziswano iinjongo zangomso .Umoya wale ndawo zimbini zonxibelelwano ulunge kakhulu, obabekwa isiseko sentsebenziswano yexesha elizayo.
Kuyaqondakala ukuba umzi-mveliso wethu uza kufumana ngaphezulu kwe-1,000Ton yee-odolo ze-1x61mm, ∮42mm intambo yentsimbi engenazingcingo ukuba intsebenziswano le iyaphumelela.
Ezona mveliso ziphambili ziintambo zelifti, iintambo zemigodi, iintambo zenqanawa, iintambo zepetroleum, intambo zoomatshini bamazibuko, njl. enobubanzi be-6.0mm-42.0mm. Inkampani inamandla obuchwephesha obunamandla: inkampani ineengcali zobuchwephesha ezivela ku-Tianjin Yisheng wokuqala ebebandakanyeka kwimveliso yentambo yentsimbi iminyaka emininzi.
Zeziphi iindlela ezichanekileyo zokusetyenziswa kunye nolondolozo ngentambo yocingo?
(1) Isantya sentambo ebalekayo yocingo kufuneka sizinze ngexesha lokusebenza, kwaye akufuneki sidlule umthwalo ukuthintela umthwalo wothuko;
(2) Ukugcinwa Intambo yocingo yentsimbi iye yafakwa igrisi eyaneleyo xa yenziwe, kodwa emva kokusebenza, igrisi iya kuncipha ngokuthe ngcembe, kwaye umphezulu wentambo yocingo lwentsimbi uyakuhlala uthuli, ubutyobo nobunye ubumdaka, obangela ucingo lwentsimbi Intambo kunye nezithungu zokunxiba kunye nomhlwa. Ke ngoko, kufuneka icocwe kwaye ifakwe iaroli rhoqo. Indlela elula kukusebenzisa ibrashi yocingo kunye nezinye izixhobo ezihambelanayo ukusula uthuli kunye nokunye ukungcola kumphezulu wentambo yocingo, kwaye ngokulinganayo uthambise intambo eshushu neyanyibilikayo yocingo kumphezulu wentambo yocingo, okanye ukutshiza Ioyile yenjini engama-30 okanye engama-40 kumphezulu wentambo yocingo, Kodwa musa ukutshiza kakhulu uze ungcolise okusingqongileyo;
(3) Iirekhodi zokuhlola Ukusetyenziswa kweentsontelo zentsimbi kufuneka zihlolwe rhoqo kwaye zibhalwe phantsi. Ukongeza koku kucoca kungasentla kunye nokufaka ioyile, umxholo wohlolo oluqhelekileyo kufuneka ujongisiswe kwinqanaba lokunxiba, iingcingo ezaphukileyo, umhlwa, kunye namagwegwe okuloba, imisesane kunye nokuthambisa. Nxiba iindawo ezinobuthathaka ezinje ngemijelo yevili. Nakuphi na ukungaqheleki kufuneka kulungiswe okanye kutshintshwe ngexesha.